अत्याधुनिक हेभी औजारको प्रयोगले मात्र नेपालको निर्माण र विकासलाई गति दिन सक्छ– गगन तिरुवा
युनिक कस्ट्रक्सन अत्याधुनिक औजार बिक्री मात्र हैन, सञ्चालनको सेवा पनि दिन्छ, नेपालको तीव्र विकासका लागि भूमिका खेल्न चाहन्छ
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा नेपालमा पूर्वाधार विकास र निर्माण कार्यले तीव्र गति लिदै छ । योसँगै निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक विभिन्न उपकरण पनि भित्रिने क्रम बढ्दो छ ।
आधुनिक निर्माण उपकरणको प्रयोगबाट अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्न, हाई स्टेन्डर सडकहरु, हाइवे तथा पुलहरु निर्माण गर्न पनि छिटो हुने, खर्चमा पनि किफायति, वैज्ञानिक ढंगको संरचना र निर्माण कार्य पनि टिकाउ हुनेमा कुनै दुई मत छैन ।
किनकि परम्परागत रुपले काम गर्ने युग अब समाप्त भइसकेको छ ।
गुणस्तरीय र दीर्घकालीन निर्माणको अभावमा २०७२ वैशाखको भूकम्पबाट भवनहरु भत्केको हामीले देखेकै हौं । निर्वाचन लगत्तै मुलुकले १० ओटा औद्योगिक सहर बनाउने काम सक्नेवाला छ ।
हुलाकी रजामार्गदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि बन्दै छन् । हाइड्रो पावर क्षेत्रमा पनि हेभी औजारको आवश्यकता बढिरहेको छ ।
अबका दिनमा हरेक नगरपालिकाले आफ्नै तरिकाले सहरीकरण र विकास गर्नेवाला छन् । गाउँ गाउँमा विकासको नयाँ लहर नै आउनेवाला छ ।
यस्तो बेलामा अत्याधुनिक निर्माण औजारहरुको आवश्यकता अझै बढ्नेवाला छ । र, सोही अनुसारका सिकर्मी, डकर्मी र तालिम प्राप्त जनशक्तिको पनि नेपालमा ठुलो संख्यामा आवश्यकता बढ्न जाने छ ।
यस कुरालाई ध्यान दिने कस्ले ?
सरकारले भन्दा पनि बरु निजी क्षेत्रले व्यावसायिक रुपमै भने पनि आ–आफ्नो स्थानबाट नेपालमा नयाँ नयाँ हेभी औजारहरु भित्राइ रहेका छन् ।
निर्माण क्षेत्रमा पनि नयाँ किसिमका औजार र नयाँ किसिमको सीप र जनशक्ति लगानी भइरहेको अवस्था छ । तैपनि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा निर्माण उपकरण छैनन् ।
र, कतिपय ठाउँमा भएका अत्याधुनिक उपकरणहरुको प्रयोग गर्न पनि हुन सकेको पाइन्न किन ? यसको कारण के हो ? कि निर्माण औजारको महत्त्व नजानेर हो ?
महत्त्व कम भएर भन्दा पनि यसको प्रयोगबारे ज्ञान नहुँदा निर्माण व्यवसायीले समेत यस्ता औजारहरुको प्रयोग नगरेको बुझाइ छ युवा उद्यमी गगन तिरुवाको ।
युनिक कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देशक तिरुवा यही कन्स्ट्रक्सनबाट विगत ४ वर्षदेखि अत्याधुनिक निर्माण औजार बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।
युनिक कन्स्ट्रक्सन नेपालको निर्माण औजार बजारमा फरक ब्रान्ड हो, किनकि यसले फरक तरिकाले काम गर्ने गर्छ ।
हेभी औजार सञ्चालन गर्न, ठुल्ठूला भवनमा आरएमसीको प्रयोग जस्ता विषयमा यसले परामर्श तथा प्रयोगमूलक सीप सिकाउने काम पनि गर्ने व्यवसायी तिरुवा बताउँछन् ।
हातमा सीप हुँदा विदेश र स्वदेशमै पनि युवाहरु बिक्न सक्छन् भन्ने कुरा उनको कामबाट मानिस सिक्न सक्छ ।
युनिक कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिले आफ्नो ब्रान्डका ग्राहकहरुलाई दिने सेवा सुविधा र निर्माण औजार र यसको नेपाली बजारका बारेमा निर्माण सञ्चारसँग राखेको धारणा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ--
एउटा युवा, अरु पनि त अवसर थिए होलान्, तर निर्माण क्षेत्रको उपकरण विक्रेता बन्नु भएको छ, कसरी आउनुभो यो क्षेत्रमा ?
जन्मले म नेपाली हुँ । तर मैले शिक्षादीक्षा भने भारतमा गरें । म पेशाले मेकानिकल इन्जिनियर हुँ । मैले मेरो करिअरको सुरुवाती चरणमा भारतको टाटा इन्टरनेसनलको कन्स्ट्रक्टिभ इक्विप्मेन्ट डिभिजनमा रहेर सर्भिस इन्जिनियरको रुपमा काम गरें ।
त्यसपछि केही समय कङक्रिट मेसिनको सेल्स डिभिजनमा पनि काम गरें । त्यसपछि म नेपालमा आएँ र केही समय मैले नेपालमा नाम चलेका निर्माण उपकरण विक्रेता कम्पनीमा प्रबन्धकका रुपमा काम गरें ।
सन् २०१३ मा हामी तीन जना साथीहरु मिलेर कंक्रिट मेसिनका लागि सेवा प्रदायक कम्पनीका रुपमा युनिक कन्स्ट्रक्सन लिएर नेपाली मार्केटमा उदायौं ।
किन हेभी औजार व्यवसायमै हात हाल्नु भयो त ?
कनकि मेरो पढाइ मेकानिकल इन्जिनियरमा थियो ।
मैले काम गरेको अनुभवले पनि मलाई यही क्षेत्रमा हात हाल्न प्रेरित गर्यो । यो क्षेत्रमै किन हात हालियो त भन्दा, नेपाली मार्केट उदाउँदा बजार हो ।
भूकम्प अघि पनि नेपाली बजारमा यसको काम गरेको अनुभव मसँग थियो । भूकम्प पछि पुनर्निर्माणको चरणमा नेपाल नै प्रवेश गरेको छ । यसले पनि अवसरहरु सिर्जना गरेको अवस्था हो ।
अबका दिनमा पनि नेपालको विकासको काम त धेरै बाँकी छ । यी सबै कुरा हेर्दा यसको बजारमा केही नयाँ काम गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लागेकाले पनि यो क्षेत्रमा हात हालेको हुँ ।
कस्तो नयाँ कुरा तपाईहरुले गर्नु भयो त ?
एकदमै ठिक प्रश्न गर्नुभयो । हामीले के नयाँ गरयौं भने, अरुले बिक्री र व्यापार मात्र गरे । तर, हामीले सेवामा पनि ध्यान दिन थाल्यौं । हामीले पनि कंक्रिट इक्वीप्मेन्ट नै बिक्री गरेका हौं । तिनमा ब्याचिङ प्लान्ट, मिक्सचर र कंक्रिट पम्प जस्ता इक्वीप्मेन्ट पर्छन् ।
तर नेपालमा अत्याधुनिक यस्ता निर्माण औजारबारे निर्माण व्यवसायी नै सचेत छैनन् ।
घर बनाउनेदेखि हाउजिङहरु बनाउन पनि चाहिने यस्ता मेसिनको सेवा हामीले सुरु गर्यौं । हामीले यसबारे मानिसलाई आवश्यकता सिकायौं र चलाउने कसरी भन्ने पनि सेवा दिन थाल्यौं । यही नै हामीले गरेको नयाँ काम हो ।
नेपालमा कंक्रिट इक्वीप्मेन्टको अवस्था कस्तो छ त ?
अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यहाँको निर्माण क्षेत्रमा अत्यन्त न्यून मात्रामा कंक्रिट इक्वीप्मेन्ट प्रयोग भएको पाइन्छ । यसले गर्दा पनि निर्माण कार्य दिगो बन्न सकेका छैनन् ।
बनेका संरचनामा पनि अधिक खर्च भएको छ ।
०७२ वैशाखमा गएका भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको गति हेर्दा पनि पुनःनिर्माणको क्षेत्रमा समेत यस खाले औजारको प्रयोग हुन सकेको देखिदैन ।
भूकम्पले बिग्रेका अधिकांश संरचना परम्परागत ढंगले नै बनिरहेको देख्दा नेपाल बन्ने कहिले होला जस्तो लाग्छ ।
जबकि यस्ता औजारको प्रयोगले काम वैज्ञानिक, बलियो र छिटो हुन्छ भन्ने मानिसहरुमा चेतना विकास नै भएको छैन । विस्तारै विस्तारै बुझ्ने क्रम भने बढेको छ ।
युनिक कन्स्ट्रक्सनले कस्तो सेवा दिँदै आएको छ त ? युनिक कन्स्ट्रक्सनले सुरुका दिनदेखि नै बिक्री मात्रै गरेको छैन ।
बिक्री पछिको सेवा सुविधा पनि हाम्रो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । कुनै निर्माण व्यवसायीले मेसीनको खरिदसँगै बिक्री पछिको सेवालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले निर्माण व्यवसायीलाई बिक्री पछिको सेवामा सहज होस् भन्नका लागि हामीले १७ जना सर्भिस इन्जिनियरलाई निरन्तर सेवामा लगाइ रहेका छौं ।
युनिक कन्स्ट्रक्सन पुद्ज्मेस्टर्स मेसीनको आधिकारिक बिक्रेता हो । यो जर्मन कम्पनी हो र विश्वकै नं १ कंक्रिट कम्पनी हो ।
यस्तो कम्पनीसँग सहकार्य गरेर नेपालमा काम गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ । यतिबेला युनिक कन्स्ट्रक्सनले कंक्रिट मेसीन भित्र्याउने र नेपाली निर्माण व्यवसायीसम्म पुर्याउने काम गरिरहेको छ ।
कम जनशक्तिमा बढी काम कसरी गर्ने भन्ने कुराको परामर्श सेवा पनि युनिक कन्स्ट्रक्सनले दिन्छ । र, कंक्रिट मेसीन संचालनका लागि आवश्यक तालिमको निःशुल्क सेवा पनि दिने गरेका छौं ।
निर्माण व्यवसायी र आमउपभोक्तालाई तपाईको सुझाव के छ ?
नेपालमा केही निर्माण व्यवसायीले कंक्रिट मेसीनको प्रयोग गरे पनि धेरै निर्माण व्यवसायीहरु निर्माण उपकरणका बारेमा त्यति जानकार हुनुहुन्न । नेपालमा आरएमसी मेसीन पनि आइरहेको छ जसले रेडीमेड घर ढलान गर्न सक्छ ।
यसका लागि युनिक कन्स्ट्रक्सन मात्र एक कम्पनी हो जसले आरएमसी ढलानका लागि आवश्यक तालिम लगायत अन्य प्याकेजमा समेत निःशुल्क सेवा दिन्छ ।
यस्ता अत्याधुनिक निर्माण उपकरणका बारेमा निर्माण व्यवसायी तथा आम उपभोक्तामा समेत जानकारीको अभाव छ ।
त्यसैले सरकार लगायत निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीले निर्माण उपकरणका बारेमा जनचेतना ल्याउन जरुरी छ ।
त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिदेखि आम जनतामा पनि निर्माण उपकरणको महत्त्वको बारेमा जानकारी गराउन अत्यन्त जरुरी छ । यस क्षेत्रमा निर्माण मिडिया जस्ता सञ्चार माध्यमले पनि भूमिका खेल्नु पर्ने मैले देखेको छु ।
नयाँ ब्रान्चबारे केही कुरा छन् कि !
हामी तिहारपछि लगत्तै पोखरामा नयाँ ब्रान्च खोल्दै छौं । यसले पोखरा जस्तो पर्यटकीय नगरीमा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, महानगरका लागि चाहिने सहरीकरणको विकास, बाटो र सडक निर्माणमा थप टेवा दिन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
पोखरा सहरका लागि युनिक कन्स्ट्रक्सनले दिने योगदान साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण हुने मैले देखेको छु ।
बिहीबार, १९ असोज २०७४